Matroska ama qaab MKV waa mid ka mid ah kuwa qaabab kuwaas oo si weyn loo aqbalay oo ay OS iyo dhufto ee adduunka oo dhan. Arrinta ay tahay in user ma heli karo oo tayo leh oo ku jira gobolka of farshaxanka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user helo natiijada ugu wanaagsan haddii qaab ah waxaa loo baddalaa wax loo texgelinayaa inuu yahay mid ka mid ah ugu fiican.
Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo MKV in AVCHD?
Qeybta 2: Beddelaan MKV in AVCHD la Wondershare
Qeybta 3: Beddelaan MKV in AVCHD la freeware
Qeybta 4: MKV VS AVCHD
Qeybta 5: AVCHD
Qeybta 6: MKV
Waxaa sidoo kale loo arkaa in ay faa'iidooyinka qaab AVCHD taas oo ka dhigaysa hubnaa in qaab kale loo rogaa si AVCHD oo aan ka kaaftoomi iyo waxa ugu muhiimsan ee arrintan la xiriira in ay tahay in la ogaadaa waa in user helo dhamaadka ugu fiican ama natiijada daawashada ka marka loo isticmaalo qaab AVCHD ah. Ka dib waa labada faa'iidooyinka sare ama si kale loo dhigo sababta ah in loo isticmaalo si loo hubiyo in MKV ah waxaa loo baddalaa qaab AVCHD fudayd iyo qanacsanaanta,
1. qaab AVCHD waa la jaan qaada Bluray iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in technology Bluray ma aha oo kaliya weyn loo isticmaalo, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in this ah la xiriira. Technology ayaa hadda la soo saaray si loo hubiyo in dhammaan cajaladaha Bluray la sameeyey la socon kara qaab AVCHD in samaysay shaqada ah.
2. AVCHD waxaa la socotid in waxyaabaha loo hubiyo in arrinta guud ee aan la xalin kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican iyo farsamooyinka ugu horumarsan si ay u hubiyaan in bandhigidda xogta aan la hagaajin kaliya laakiin waxaa sidoo kale lagu helay galay ugu fiican gacmaha qaab ee warshadaha. Waxaa sidoo kale in la xuso in user natiijada ugu wanaagsan leh qaab AVCHD ka heli kartaa.
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco si loo hubiyo in Wondershare convertor waxaa loo isticmaalaa habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah si aad u hesho natiijooyinka la doonayo fudayd iyo qanacsanaanta,
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi iyo rakibay:
2. user ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in button files add waxaa riixi iyo files MKV waxaa lagu daray interface ugu weyn:
3. Laga bilaabo guddi saxda ah qaab ku haboon oo ay dhacdo in this qaab AVCHD waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in habka horumarka:
4. button diinta waa in la riixi si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
Soo socda waa habka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.afterdawn.com/software/audio_video/video_editing/smartlabs_tsmuxer_win.cfm waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in TSmuxer la soo bixi TSMuxer waa ka dibna in la bilaabay:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in file MKV waxaa markaas ku daray in ay interface adiga oo riixaya badhanka ku dar:
3. channels geeyo waa ka dibna in la soo xulay:
4. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in cutubka waxaa loo doortay:
5. folder saarka waa ka dibna in la soo xulay:
6. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in badhanka OK la isku soo riixayo iyo habka ka baxayo:
Labada qaabab ayaa lagu sharaxay si gooni gooni ah si loo hubiyo in farqiga u buuxda fudayd reveled:
Waxay u taagan tahay Advanced Video sireed High Qeexid oo ay tahay qaab file ah oo ku salaysan taas oo ka dhigaysa hubiyo in lagu qoro digital oo loo maqli karo oo ka mid ah video qeexitaanka sare waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo qaab this. Waxaa loo sameeyay sanadkii 2006 iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in Sony oo Panasonic waa milkiilayaasha kaliya oo abuura ee qaab si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ee ugu fiican iyo kan gobolka ee adeegyada farshaxanka arrintan la xiriira, marka aad u hesho ay timaado HD video iyo sawiro duubo.
.mkv Ayaa, mk3d, .mka iyo .mks waa 4 qaabab la xidhiidha files MKV iyo waa in la ogaadaa in ay kuwani yihiin qaabab ku saabsan oo qaab qoyska MKV ay ku xidhan tahay. MKV waxaa sidoo kale loo arkaa Warbaahinta Matroska ka Container oo la soo saaro oo isticmaalaya farsamada ay u furan yihiin il taas oo macnaheedu yahay in qalabka iyo farsamooyinka loo isticmaalo in dhisay tan madal jira oo dhan laga heli karo iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato oo lacag la'aan ah.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in haddii user rabto, inay natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira markaas qaab AVCHD yahay wax ay tahay in la arkaa in ay tahay ma aha oo kaliya gaar ah oo la xiriira Sony oo Panasonic laakiin videos iyo sidoo kale sawiro in waxaa la qaataa arrintan la xiriira waa mid ka mid ah oo la hubiyo in user helo xalka ugu wanaagsan sida faahfaahinta sidoo kale qeexidda sare. Qaab AVCHD waa mid aad loo jecel yahay ka mid ah kuwa isticmaala kuwaas oo doonaya in la hubiyo in ay sawiro HD videos ad yihiin toogasho ku daawan.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user helo adeegyada ugu fiican oo kaliya markii qaab AVCHD loo isticmaalo iyo sidoo kale waa in e xusay in qaab AVCHD waa qaab u gaar, taas oo ka dhigaysa in ay suuragal ah in user in ay xitaa RIP oo nuqul ka kooban yahay DVD ka badan drive ay adag tahay si fudud oo ku qanacsan. Waxaa sidoo kale in la xusay in qaab AVCHD waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee jeer oo dhan si loo hubiyo in user helo natiijada in ay yihiin ma aha oo kaliya waa ka ugu fiican lakiin sidoo kale siinaya natiijooyinka ugu fiican u isticmaala oo aan wax arrintan oo dhibaato taas oo ay suurto gal waayo, waxaa iyaga si aad u hesho faahfaahin ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab AVCHD waa mid ka mid ah in uu leeyahay taageero ugu heli karaa online iyo sabab la mid ah waxaa loo arkaa in ay ugu fiican.
Sida loo Beddelaan AVI in MKV
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MKV in AVCHD u PS3 Blu-ray iyo